James Swan oo baaq soo saaray ka dib kulankii Qoorqoor (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta James Swan oo baaq soo saaray ka dib kulankii Qoorqoor (SAWIRRO)
James Swan oo baaq soo saaray ka dib kulankii Qoorqoor (SAWIRRO)
Wakiilka Qaramada Midoobey ee u qaabilsan arrimaha Somaliya, Amb. James Swan ayaa baaq ka soo saaray doorashooyinka dalka, ka dib kulan uu maanta Magaalada Dhuusamareeb kula qaatay Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor)
Wafdi uu hoggaaminayay Wakiilka Qaramada Midoobey ayaa waxaa Garoonka Ugaas Nuur ku soo dhaweeyay Madaxweyne Kuxigeenka Galmudug, Cali Daahir Ciid, iyadoo daqiiqado ka dibna loo galbiyay Madaxtooyada Dhuusamareeb, halkaasoo uu kula kulmay Madaxweynaha Galmudug iyo qaar ka mida Golihiisa Wasiirada.
Geba-gebadii kulanka ayay labadooduba shir jaraa’id ku qabteen Aqalka Madaxtooyada, iyadoo James Swan uu faah faahiyay waxyaabihii ay ka wadahadleen.
“Waxaan ku booriyay in uu sii wado kaalinta uu cayaarayo ee ah joogteynta xiriirka u dhaxeeya Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada.” Ayuu yiri Wakiilka Qaramada Midoobey.
Waxa kaloo uu yiri “Waxaan markale ku caliyey aragtida saaxiibada caalamiga ee ah in heshiis iyo wadashaqayn lagu horumarinayo waxa u wanaagsan dalka ay tahay waxa iminka looga baahan yahay Soomaalida, si loo xaqiijiyo in Somaliya ay ku sii taagnaato waddada nabadda iyo xasilloonida.”
James Swan ayaa dhinacyada siyaasadda ugu baaqay in ay sameeyaan dadaal kastaa, oo ay isugu imaan karaan, si doorashooyinka qaranka loo qabto, iyadoo markaasi lagu saleynayo heshiiskii 17-kii bishii September ka wada gaareen Magaalada Muqdisho.
“Waxaan ku boorinaynaa dhammaan hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay sameeyaan dadaal kasta, oo ay ku wada-hadlayaan, si doorashooyinka qaranka loo qabto ayada oo heshiis lagu wadayahay, salna looga dhigayo heshiiskii 17-kii September, isla-markaana ay xoojinayaan daahfurnaan, caddaalad iyo u wada dhamaansho.” Ayuu yiri Swan.
Beesha Caalamka ayaa dadaal ugu jirta in dalka laga qabto doorasho loo dhanyahay, iyadoo laga foggaanayo wax kastoo caqabad ku noqon kara hufnaanta doorasho loo dhanyahay.
Previous articleMareykanka oo digniin ka soo saaray doorashooyinka dalka
Next articleRooble oo kormeeray Xarunta Agoonta Booliska (SAWIRRO)